| प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २५, २०७४ ::: 109 पटक पढिएको |
मेरो देशलाई के भइरहेको छ ? ब चाऊ प्रभु बचाऊ ! बल्लतल्ल संविधान बनाउनुभयो । संविधानको सर्बस्वीकार्यताबारे छलफल चलिरहेकै छ । जे हो, तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भयो । यो नै सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा हो । अस्थिर सरकार नेपालको चुरो समस्या हो । समस्याको चुरो पत्ता लगाएर जनताले स्थिर सरकारका लागि म्यान्डेट दिएको छ । भोट माग्ने बेलाको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न ? केही समय कुर्नै पर्ला । सरकार बनाउँदै गर्नुहोला । हामी नागरिकले खोजे र सोचे अनुसारको सरकार बनाउन सफलता मिलोस् । अगि्रम शुभकामना छ । सरकारविनाको राज्य हुँदैन । राज्यविनाको नागरिक हुँदैन । एउटा नागरिकका लागि बाँच्न पाउनु सबभन्दा ठूलो मानवअधिकार हो । राज्य सबैको संरक्षक हो । सरकार अभिभावक हो । मलाई चिच्याई चिच्याई सोध्न मन लागिरहेको छ- के हाम्रो देशमा सरकार छ ? देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेता र पार्टीहरू छन् ? यदि छन् भने हामी नागरिकलाई जवाफ चाहियो ।